Xaquuqda Guryaha Kiradooda la Kabo ee Dhibanayaasha Dagaalka Qoyska Dhexdiisa ah dhibku ka soo gaaro iyo galmada Xoogid ah. | LawHelp Minnesota
Xaquuqda Guryaha Kiradooda la Kabo ee Dhibanayaasha Dagaalka Qoyska Dhexdiisa ah dhibku ka soo gaaro iyo galmada Xoogid ah (PDF)350.14 KB
Ogaysiiska VAWA (PDF)116.5 KB
Dhibanayaasha Dagaalka Qoyska Dhexdiisa ah ee Guryaha Kiradooda la Kabo Xaquuq ayey leeyihiin
Waxaa jira sharci dowlada dhexe leedahay oo la yiraa VAWA oo ku caawiya hadii adigu ama qof qoyskaaga ka tirsani uu yahay dhibane dagaal qoyska dhexdiisa ah dhib ka soo gaaray ama galmo xoogid ah loo geystay aadna codsaday ama aad ku nooshahay:
Guri Kiradiisa la Kabo
Barnaamijyada Warqada 8 (Section 8)
Guryaha Miyiga ee Hay’ada USDA
Guryaha Danyarta ee Canshuurta La Xisaabiyo Qaybta 42 (Section 42)
VAWA waxa ay u taagan tahay Sharciga la Dagaalanka Dagaalka haweenka lagu Hayo. Waxa uuna yiraahdaa barnaamijka guryahu uma diidi karo guri, kaamana saari karo guri adiga iyadoo sababtu tahay falal uu kuu geystay adiga ama qof qoyskaaga ka tirsan ku tacadiyahaagu ama weerarahaagu. Barnaamijyada guryahu waxaa la siiyey ilaa Juun 14, 2017 inay ku dajiyaan nidaam degdeg ku wareejin ah dhibanaayasha dagaal qoyska dhexdiisa ah dhib ka soo gaaray ama galmo xoogid ah loo geysto ee u baahan inay guuraan si ay amaan u helaan hadii guri kale la heli karo.
Dagaalka qoyska dhexdiisa ahi waxa uu noqon karaa dagaal adigu wax lagugu yeelo ama qof qoyskaaga ka tirsan, ama dhib uu kuu geysto qof aad is shukaansataan ama galmo xoogid ah. Waxaa dhici karta inay joojiyaan liiska tacadiyaha ama weeraraha oo adiga kaliya guriga lagaa kireeyo.
Sharcigan macnahiisu ma aha in hay’ada guryaha ama qolada guriga lahi aysan fulinayn xeerarka kale ee guryaha ama qodobada kale ee heshiiska liiska ku yaal. Guriga waa lagaaga saari karaa wax kale oo ah ku xadgudub xeerarka heshiiska liiska ku qoran.
Sidee ayaan ku ogaan karaa in sharciga VAWA uu i caawin karo?
Eeg santuukha 2aad. Kala bax kan ku haboon xaaladaada- ma hadaa codsanaysaa guri mise horey baan u ahayd kireyse. Hadii aad tiri “haa” oraahda santuukha hore, waxaa ku dhowraya sharciga VAWA. Eeg oraahaha kale. Hadii aad oron karta “haa” mid ka mid ah uun, buuxi ogaysiiska ku lifaaqan warqadan xoga aruursan. U gee ogaysiiska hay’ada guryaha, mulkiilaha ama qolada guryaha una sheeg in uu ku dhowrayo adiga sharciga VAWA iyo waxa aad rabto. Hubi inaad saxiixdo warqada aadna naftaada ugala haro nuqul.
Waxa aan codsaday guri dowladeed, guryaha kiradooda la kabo, Guryaha Miyiga ee Hay’ada USDA, Guryaha Danyarta ee Canshuurta La Xisaabiyo (Section 42) ama waxa aan haystaa Warqada 8 (Section 8).
Codsigaygii waa la diiday.
Qof qoyskayga ka tirsan ayaa waxa uu ahaa dhibane dhib ka soo gaaray dagaal qoyska dhexdiisa ama galmo xoogid ah.
Codsigaygii waa la diiday sababtoo ah wax u sameeyey tacadiyahu ama weerarahu ama waa cawaaqib si toos ah uga dhashay waxa uu sameeyey tacadiyahu ama weerarahu.
Horey u ahaa Kireyste
Waxa aan ku noolahay guri dowladeed, guryaha kiradooda la kabo, Guryaha Miyiga ee Hay’ada USDA, Guryaha Danyarta ee Canshuurta La Xisaabiyo (Section 42) ama waxa aan haystaa Warqada 8 (Section 8).
Waxaa la ii soo diray biil ah khasaare uu geystay tacadiyahu ama weerarahu.
Waxa aan helay ogaysiis ah ku xadgudub kiiska, ogaysiis joojin liiskayga ah ama warqado guri ka saarid ah.
Lacag baa la igu soo dalacay, liiskaygii waa la joojiyey ama gurigii waa la iga saaray iyadoo sababtu tahay wax u sameeyey tacadiyahu ama weerarahu ama waa wax cawaaqib ah si toos ah uga dhashay waxa uu sameeyey tacadiyahu/weerarahu.
Waxa aan u baahnahay inaad u guuro guri kale oo kiradiisa la kabo si kolkaa dhibanaha qoyskayga ee dhibku ka soo gaaray dagaalka qoyska dhexdiisa ah ama galmo xoogista ah uu uga baxsado waxyeelida uu qarka u saaran yahay ee uga imaanaysa tacadiyaha ama weeraraha.
Waxaa u baahnahay inaan u ‘adeegsado” Warqada 8 (Section 8) meel cusub si aan u ilaaliyo amaanka dhibanaha qoyskayga ee dhibku ka soo gaaray dagaalka qoyska dhexdiisa ah ama galmo xoogista ah.
Waxa aan u baahnahay in bixiyaha kabida kiradayda ama qolada gurigu ay ka saaraan tacadiyaha ama weeraraha liiska laakiin ay u ogolaadaan in adiga iyo qoyskaygu aan ku sii jirno liiska.
Dakhligaygu hoos ayuu u dhacay dagaal qoyska dhexdiisa ah galmo xoogid ah awgeed, kolka waxa aan u baahanahay in kiradayda dib loogu xisaabiyo.
Hadii aadan amaan ahayn iyadoo sababtu tahay dagaal qoyska ah awgii la xiriir Qolada la yiraa Adeegyada Maalinta Koowaad (Day One Services). Wac 1(866) 223‑1111 ama dhambaal (text) u dir (612) 399‑9995 ama gal shabakada www.dayoneservices.org or www.MNcasa.org
Hadii aadan amaan ahayn iyadoo sababtu tahay Galmo xoogid ah oo laguu geystay wac: 1(800) 656‑4673.
Hadi aad u baahan tahay akhbaar kale, caawimaad dhanka sharciga ah si aad u hesho xaqaaga uu dhigayo sharciga VAWA, ama lagugu yiri sharciga VAWA adiga kuma quseeyo wac, xafiiska adeegyada sharciyada.